Kulula kangakanani ukwenza ishishini kunye nawe kwi-Intanethi? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 26, 2009 Douglas Karr
Phantse yonke imihla ndifumana amakhonkco kwiimveliso okanye kwiinkonzo ezikwi-Intanethi kwaye kunzima kum ukufumana into endiyifunayo okanye ukuhamba indlela ukuya apho ndinqwenela ukuya khona. Kuyamangalisa kum ukuba kunzima kangakanani ezinye iinkampani ukwakha iiwebhusayithi zazo. Ndiya kwenza ishishini kwiindawo ezininzi ukuba azenzanga ukuba kube nzima kangaka!
Ndenze nje yonke into ngenkqubo yeefom ezininzi kwisiza kwimizuzu embalwa edlulileyo ukufumanisa ukuba kufuneka ndibengumsebenzisi obhalisiweyo ukusebenzisa le ndawo. Xa ndandibhalisa, lonke ukhetho lwangaphambili endalwenzileyo lwacinywa. Andibuyeli mva! Endaweni yokuthetha ngazo zonke iisayithi ezoyikekayo, ndiza kuyichukumisa wenza sebenza ngokugqibeleleyo endaweni yoko!
Izolo bendiphethwe yintloko ebuhlungu yemigraine. Ndinoxinzelelo ngoku mva nje - ndizama ukuzibophelela okuninzi kwaye ubomi bam / umjikelo womsebenzi uye wangumntu omkhulu. Andikatyi kakuhle kwaye ndiphosa ezinye iiponti ezingafunekiyo. Abahlobo abambalwa bafikile kwaye bandixelela ukuba lixesha lokuba ndenze into malunga nayo. Andikuthandi ukuya koogqirha, ke ndikhangela ezinye iindlela.
Kwimizuzu embalwa yokuthumela malunga ne-migraine yam kwi-Twitter, ndafumana le tweet elandelayo Isitshixo sokunyanga:
Ndizulazule ndaya kwi Isitshixo sokunyanga indawo, funda ezinye iinkcukacha ezikule ndawo, kwaye ndonwabile kuba bekukho ifayile ye- Ishedyuli ekwi-intanethi (phezulu iphepha ngalinye!). Ndijonge ishedyuli yam kwaye ngoku ndineseshoni yokwazisa noCheryl ocwangciselwe intsasa yangoMgqibelo. Le ndlela kulula ukuba indawo yakho ibe lula. Injalo?
tags: irhafu yentengiso ye-intanethimobilenokutshoupapasho ndaba zekhampani
Uyiqala njani iNkampani ephumeleleyo
Juni 26, 2009 ngo-3: 22 PM
Sweet. Ndibhukishe idinga lam kunye ne-Ossip's kwiSangqa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwi-intanethi. Kwakulula kwaye kungekho ntlungu, kwaye kungafuneki ukuba ndithethe nabani na. Ndingudoki, ngoko ke andithandi ukuthetha nabantu endingabaziyo. 🙂
Juni 26, 2009 ngo-11: 17 PM
Ndibhale amanqaku amaninzi kule vein, efana "Njani UNGAFUMANI umthengi: Iimpazamo ezintlanu eziqhelekileyo zentengiso" Andiyi kungcolisa izimvo zakho apha ngamakhonkco, kodwa ayikho kwiwebhusayithi edweliswe kwi-disqus (ngubani onewebhusayithi enye? )